रसूल (सन्देष्टा) हरुमाथि आस्था राख्नु (‘ईमान’ का ६ वटा आधारहरु) – Islam Guide
रसूल (सन्देष्टा) हरुमाथि आस्था राख्नु (‘ईमान’ का ६ वटा आधारहरु)
रसूल (सन्देष्टा) हरुमाथि आस्था राख्नु ('ईमान' का ६ वटा आधारहरु)
डिसेम्बर 2, 2017 Comments
मानिसहरुलाई धार्मिक सन्देशको आवश्यकता-
के हावा र पानी बिना सास फेर्न सकिन्छ ? सास बिनाको धड्कन चल्न सक्छ ? त्यसरी नै रसूल बिनाको जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिदैन, किनकि उनीहरु नै संसारको लागि प्रकाश र जीवन हुन्। यदि आत्मा, जीवन र प्रकाश छैन भने दुनियाँको के अर्थ ?
त्यसैले अल्लाहद्वारा प्रदत्त सन्देशलाई ज्यान भनिएको छ। ज्यान हुँदैन भने जीवनको अन्त हुनेछ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “यसरी नै हामीले तिमीतर्फ आफ्नो आदेशबाट ‘आत्मा’ (कुरआन) अवतरण गर्यौं। ईमान र किताब के हो तिमीलाई केही पनि थाहा थिएन। तर हामीले त्यसलाई ज्योति बनायौं, हाम्रा भक्तहरुमध्ये जसलाई चाहन्छौं त्यसद्वारा मार्गदर्शन गर्छौं।” (श्रोत- सूरह अश्-शूरा : ४२/५२)
बुद्धिले केही राम्रा र न राम्रा कुराहरुलाई छुट्याउन सकिन्छ, तर त्यसको विस्तृत जानकारी, ईबादतका पूर्ण तरिका तथा कैफियतहरु बिना वह्य र सन्देश जान्नु असम्भव छ।
लोक र परलोकका सफलता बिना रसूल प्राप्त गर्न सकिन्न। राम्रा र नराम्रा कुराहरुको राम्ररी पहिचान उनीहरुको मार्गदर्शन बिना सम्भव छैन। याद राख्नुहोस् ! जसले दूत र दूतत्वबाट विमुख हुन्छ, उसले विमुखता अनुसार व्याकुल्ता, चिन्ता र कठोरता भोग्नु पर्छ।
आस्थाको एउटा आधार-
रसूलहरुमाथि आस्था राख्नु ईमानका ६ वटा आधारहरुमध्ये एउटा आधार हो। अल्लाहले भन्नु भएको छ… रसूल र आस्थावानहरुले आफ्ना पालनकर्ताको तर्फबाट अवतरित कुराहरुमाथि ईमान ल्याएका छन्। सबै अल्लाह, उहाँका फरिश्ताहरु, ग्रन्थहरु र उहाँका रसूलहरुमाथि आस्थावान भए।” (श्रोत- सूरह अल्-बकरह : २/२८५)
तसर्थ एउटा मुस्लिमले सम्पूर्ण रसूलहरुमाथि बिना कुनै विभाजन आस्था राख्नु पर्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। हामीले यहूदी र ईसाइ झैं एकलाई मान्नु र अर्कोलाई नमान्नु कदापि गर्नु हुँदैन।
रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले ईमानको ’boutमा भन्नु भएको छ… “तिमी अल्लाह, उहाँका फरिश्ताहरु, किताबहरु, रसूलहरु, कयामत (महाप्रलय) को दिन र राम्रो वा नराम्रो भाग्यमाथि आस्था राख।” (श्रोत- मुस्लिम : ८)
रसूलहरुमाथि आस्थाको अर्थ-
अल्लाहले प्रत्येक समुदायमा ’emमध्येबाट एउटा सन्देष्टा (रसूल) पठाउनु भयो, उनीहरुले बिना साझेदारी एक मात्र अल्लाहको उपासना गर्ने आह्वान गरे भनेर दृढतापूर्वक आस्था राख्नु। उनीहरु सबै सत्य र सत्यलाई पुष्टि गर्ने, सत्यवान र इमान्दार थिए। उनीहरुले अल्लाहको सन्देशलाई नलुकाई, त्यसमा आफ्नो तर्फबाट केही फेरबदल नगरी पूर्ण रुपमा पुर्याए; न त केही कमी गरे न बढी नै। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “रसूलको काम स्पष्टरुपमा सन्देश पुर्याउनु बाहेक अरु केही छैन।” (श्रोत- सूरह अन्-नहल : १६/३५)
रसूलहरुमाथिको आस्थाले कुन विषय वस्तुलाई समेटेको छ?
१) उनीहरु अल्लाहका सच्चा सन्देष्टा हुन्, उनीहरु सबैले मात्र अल्लाहको उपासना गर्ने र उहाँको उपासनामा अरु कसैलाई साझेदारी न गर्ने आह्वान गरेका थिए भन्ने कुरामाथि आस्था राख्नु। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हामीले प्रत्येक समुदायमा रसूल पठायौं। केवल अल्लाहको उपासना गर र उहाँ बाहेक सम्पूर्ण मिथ्या उपास्यको पूजादेखि टाढा रहने गर।” (श्रोत- सूरह अन्-नहल : १६/३६)
उनीहरुका वैधानिक उप-नियमहरु जुन त्यस समुदायको लागि उचित थियो, त्यसमा मात्र भिन्नता पाइन्छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हामीले तिमीहरुका लागि एउटा धर्म-विधान र कार्यप्रणाली बनाएका छौं।” (श्रोत- सूरह अल्-माइदा : ५/४८)
२) सम्पूर्ण सन्देष्टा (नबी-रसूल) हरुमाथि आस्था राख्नु। उनीहरुमध्ये जसको नाम थाहा छ जस्तै… मुहम्मद, इब्राहीम, मूसा, ईसा र नूह (अलैहिमुस्सलाम) लाई नामका साथ र जसको नाम थाहा छैन उनीहरुमाथि सन्क्षिप्तमा आस्था राख्नु पर्दछ। जसले उनीहरुमध्ये एकलाई अस्वीकार गर्यो भने उसले सबैलाई अस्वीकार गर्यो।
३) कुरआन र हदीसद्वारा प्रमाणित रसूलका चमत्कार (मुअ्जिजा) र खबरहरूलाई सत्य मान्नु, जस्तै… मूसा (अलैहिस्सलाम) को लागि समुद्रमा बाटो बन्नु।
४) अन्तिम र सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को विधि-विधान र तरिका बमोजिम धर्म-कर्म गर्नु।
रसूलहरुका केही विशेषताहरु-
१- उनीहरु मानिस थिए, तर अल्लाहले उनीहरुलाई आफ्नो (वह्य) प्रकाशना र सन्देश पुर्याउन रसूल चयन गर्नु भयो, यो नै उनीहरु र अन्य व्यक्तिमा फरक छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “तिमी भन्दा पहिले पुरुषलाई नै रसूल बनाएर पठायौं र उनीहरुमाथि वह्य अवतरण गर्यौं।” (श्रोत- सूरह अल्-अंबिया : २१/७)
उनीहरू शारीरिक बनावट, रुप र आचरणमा उच्च स्थानमा पुग्नु भयो, बंशमा सबभन्दा भद्र हुनहुन्थ्यो, बुद्धि र प्रष्ट भाषा भएकोले दूतत्वको भार उठाउन सक्नुका साथै जिम्मेवारी वहन गर्न योग्य हुनहुन्थ्यो, तर अल्लाहमा पाइने विशेषताहरु जस्तै सृष्टि गर्नु वा उपास्य हुनुमध्ये कुनै विशेषता उनीहरुलाई प्राप्त थिएन।
एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिले पनि सरलताको साथ रसूललाई अनुसरण गर्न सकोस् भनेर अल्लाहले मानिसलाई नै रसूल बनाउनु भएको छ र उहाँको जीवनलाई सबैको लागि आदर्श घोषित गर्नु भएको छ।
२- अल्लाहले उनीहरूलाई अरु मानिसको दाँजोमा रसूल बनाएर ठूलो गुण लगाउनु भएको छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “भनिदेऊ, म तिमीहरु जस्तै एउटा मानिस हुँ। ममाथि वह्य (प्रकाशना) गरिएको छ कि अल्लाह बाहेक अरु कोही तिम्रो पूज्य छैन।” (श्रोत- सूरह अल्-कहफ : १८/११०)
दूतत्व कुनै आध्यात्मिक तपस्या, विवेक र बौद्धिक तर्कद्वारा प्राप्त गर्ने पद होइन। यो ईश्वरीय छनौट हो। अल्लाहले समस्त मानिसहरुमध्ये जसलाई चाहनुहुन्छ आफ्नो रसूल बनाउनु हुन्छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “आफ्नो दूतत्वको कार्यभार कसलाई सुम्पिने भन्ने कुराको अल्लाहलाई नै बढी ज्ञान छ।” (श्रोत- सूरह अल्-अन्आम : ६/१२४)
३- उनीहरू अल्लाहको सन्देशलाई पुर्याउनमा पवित्र छन्, त्यसैले अल्लाहका आदेशहरू पुर्याउन र सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्नमा कुनै गल्ती गर्दैनन्।
४- सम्पूर्ण रसूलहरु आफ्नो भनाइ र गराईमा सत्य छन्। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “यो त त्यही हो, जसको वाचा करुणामय अल्लाहले गर्नु भएको थियो र रसूलहरुले पनि सत्य नै भनेका थिए।” (श्रोत- सूरह यासीन : ३६/५२)
५- उनीहरुले इस्लामको आह्वान र अल्लाहको वाणीलाई सर्वत्र फैलाउनमा धेरै दु:ख र पीडा सहनु पर्यो, अनेकौं बाधाहरु खेप्नु पर्यो तै पनि ’emले हार नमानी इस्लामको झण्डालाई सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्याएर नै छाडे। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हे सन्देष्टा ! धैर्य गर, जसरी अघिका सर्वश्रेष्ठ रसूलहरुले धैर्य गरे।” (श्रोत- सूरह अल्-अह्काफ : ४६/३६)
रसूलहरुका निशानी तथा चमत्कारहरु-
अल्लाहले आफ्ना रसूलहरूलाई उनीहरुको सत्यता र दूतत्वलाई प्रमाणित गर्नको लागि विभिन्न किसिमका निशानी, अदभुत घटना, तर्क-वितर्क तथा चमत्कारहरु प्रदान गर्नु भएको छ। ती चमत्कारहरुले प्रमाणित गर्दछन् कि उनीहरु अल्लाहका सच्चा रसूल हुन्, किनकि त्यस्तो चमत्कार साधारण व्यक्तिले प्रस्तुत गर्न सक्दैनन्।
चमत्कार (मुअ्जिजा) को अर्थ : आम मानिसले आँट गर्न नसक्ने आश्चर्यजनक र अदभुत घटनालाई चमत्कार भनिन्छ, जुन अल्लाहको कृपाले रसूलहरुलाई मात्र प्राप्त हुन्छ।
तीमध्ये केही यस प्रकार छन्…
मूसा (अलैहिस्सलाम) को लठ्ठी (लौरो) जिउँदो सर्पमा परिणत हुनु।
ईसा (अलैहिस्सलाम) ले आफ्नो समुदायलाई ’emले के खाइरहेका छन् र के थन्काएर राखेका छन् भन्ने कुराहरुको सूचना दिनु।
हाम्रो रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को इशाराले चन्द्रमा दुई टुक्रामा फट्नु।